नेपाली विद्यार्थीले अन्तरिक्षमा रहेका यात्रीसँग ‘लाइभ’ कुरा गर्दै
३०, पुस काठमाडौँ । नेपाली विद्यार्थीहरुले पहिलोपटक अन्तरिक्ष केन्द्रमा रहेका चारजना बेलायती नागरिकसँग लाइभ कुराकानी गर्ने भएका छन् । राजधानीको बृहस्पति विद्या सदन विद्यालयले आयोजना गर्न लागेको कार्यक्रममा राजधानीका ७ विद्यालयका विद्यार्थीहरुले माघ ६ गते अन्तरिक्षयात्रीसँग कुरा गर्ने भएका हुन् । अ मेचेउड रेडियोको माध्यमबाट अन्तरिक्षयात्रीसँग १० कक्षासम्मका विद्यार्थीहरुले कुरा गर्नेछन् । अन्तरिक्षयात्रीहरुले आफूहरुले कसरी–के काम गरिरहेका छन् अथवा अन्तरिक्षकोबारेमा सो अवसरमा जानकारी दिने बताइएको…विस्तृत समाचार »
एस.आईसिटि. नेपालको अध्यक्षमा पौडेल
२९ पुस काठमाडौं । सूचना र संचार प्रविधि समाज नेपाल (एस.आईसिटि. नेपाल ) ले बागबजारमा साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । साधारण सभामा संस्थाका प्रमुख सल्लाकरहरु, समर्थकहरु, संरक्षक, तदर्थ समितिका पदाधिकारीहरु तथा सम्पूर्ण सदस्यहरु उपस्थित थिए । कार्यक्रमको खुल्ला सत्रमा दिप प्रजोवोलन र राष्ट्रिय गान पश्चात संस्थाका दितिय उपाध्यक्ष ज्वाला गौतमले स्वागत मन्तव्य राखेपछि, संस्थाका प्रमुख सल्लाकर तथा मर्कनटाइल कमनुकेसनका सिनियर विषेसज्ञ सुरज अधिकारीले आफू…विस्तृत समाचार »
सुचना र सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा महिलाहरुको उपस्थिति बढाउन जोड
२८ पुस काठमाडौं । सुचना र संचार प्रविधि समाज, नेपाल (एसआईसिटि नेपाल) ले पध्मकन्या क्याम्पस डिल्लिबजारमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । सुचना र संचार प्रविधिको प्रयोगमा महिलाहरुको उपस्थितिलाई बढाइ यस सम्बन्धि टुल्सहरुसँग परिचित बनाउने उद्घेश्यका साथ ७० भन्दा बढी बिबिए अध्ययनरत छात्राहरुको बिच सीप र शिक्षामा आईसिटी बिषयमा कार्यक्रम गरिएको हो । संस्थाका महासचिब बिशाल महत ले सञ्चालन गरेको उतm कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष सुभाष…विस्तृत समाचार »
काठमाडौँ । पेट्रोल तथा डिजेलबाट मात्र होइन सजिवनको तेलबाट समेत गाडि गुडेको कुरा हामी सुनेकै छौँ । नरिवलको तेलबाट गाडी गुडाएको भने अहिलेसम्म सुनिएको थिएन । तर वैज्ञानिकहरुले नरिवलको तेलबाट गुड्ने गाडीको निर्माण गरेका छन् । केहि समय अगाडि भारतको कोच्चीस्थित एससीएमएस इन्स्टच्युट अफ बायोसाइन्स एण्ड बायोटेक्नोलोजी रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट र एससीएमएस स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेक्नोलोजीका वैज्ञानिकहरुले नरिवलको तेलबाट गुड्ने गाडीको निर्माण गर्न सफल भएका…विस्तृत समाचार »
​नयाँवर्षसँगै गुगललाई फेसबुकको चुनौती, के फेसबुकले मार्ला बाजी ?
लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले नयाँ सेवा सुरु गर्ने भएको छ। यो सेवाले प्रयोगकर्तालाई विभिन्न सहरका साना व्यवसायलाई सूचीकृत गर्दै त्यसको समीक्षा पनि उपलब्ध गराउने भएको छ। यसअघि गुगल र येल्पले यो सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। डेक्सटप र ल्यापटपमा फेसबुक चलाउँदा पाइने यो सुविधाले प्रयोगकर्ताले साना पसल, रेस्टुरेन्ट, क्लिनिक, ट्राभल एजेन्सी, होटेल, पर्यटकीय स्थल, चलचित्र हल, सपिङ मलजस्ता स्थानको बारेमा सजिलोसँग जानकारी हासिल गर्न सक्छन्। फेसबुकले…विस्तृत समाचार »
फाइल ट्रान्सफर र डाटा स्टोरेजका लागि तपाईलाई यी ग्याजेट्स उपयोगी हुन सक्छन्
१.ठुला फाइल सेकेण्डमै ट्रान्सफर हुने किंगस्टन किंगस्टन हाइपरएक्स स्वाज यूएसबी फ्लक्सको माध्यमवाट ठुला फाइल र डाटा ट्रान्सफर गर्न सजिलो हुनेछ। यो ग्याजेट यसै महिना बजारमा उपलब्ध हुदैछ। यो ड्राइभ गेमिङग कन्सोल जस्तै पीएस ४ एक्सबक्स वनसँग कम्फट रहेको छ । यसको बजार मुल्य अहिले नै तोकिएको छैन । २. चार हजार जिबी डाटा स्टोर क्षमता वेसटन डिजिटलको पासपोर्ट प्रोको मुल्य बाउन्न हजार नेपालि रुपैया रहेको…विस्तृत समाचार »
कलर्सको पर्ल ब्लाक के ३ मोवाइल नेपाली बजारमा, मूल्य २१ हजार
काठमाडौं । कलर्स मोवाइलको लागि आधिकारिक विक्रेता टेलिटकले नयाँ स्मार्टफोन बजारमा ल्याएको छ । कलर्सको उत्पादन कलर्स पर्ल ब्लाक के ३ मोवाइल नेपाली बजारमा ल्याइएको हो । यो मोवाइलमा एण्ड्रोइड ललिपप ५।१ भर्सन राखिएको छ । यसमा पाँच इन्चको एचडी आइपिएस स्क्रिन, १३ मेगापिक्सल एफ २।२ सिमोस प्लस क्यामेरा राखिएको छ । यो मोवाइलमा २३५० एमएएच ली–पोलिमर ब्याट्री जडान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । मोवाइलमा…विस्तृत समाचार »
किसानलार्इ टेलिकमले दिनेभयो निशुल्क सिमकार्ड
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले विभिन्न जिल्लाका किसानलाई ५५ सयवटा सिमकार्ड र रिमकार्ड वितरण गर्ने भएको छ । टेलिकमले एकसय रुपैयाँ ब्यालेन्स र मासिक १५ एमबी डेटासहित सिम र रिमकार्ड वितरण गर्न लागेको हो । टेलिकमले कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली आयोजनामार्फत किसानलाई पहिलो चरणमा १५ सय र दोस्रो चरणमा चार हजार वटा सिमकार्ड वितरण गर्ने भएको हो । किसानलाई सिमकार्ड वितरण गर्ने…विस्तृत समाचार »
फेसबुकका मालिकले छोरीको फोटो पोष्ट गरेपछि लाइक गर्नेहरुको ओइरो
फेसबुकका सिइओ मार्क जुकरबर्ग बुवा बनेपछि उनि आफ्नो समय परिवारमा बिताउन थालेका छन् । पहिलो पटक बुवा वनेका मार्कले छोरि म्याक्सको तस्वीर फेसबुक एकाउंटमा शेयर गरेका छन् । फोटोसँगै उनले द फोर्स इन स्ट्रङ विथ दिस वान क्यापसन दिएका छन् । म्याक्स तीन हप्तकि भएकि छिन् । यस फोटोलाई करीब १६ लाख फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुले लाइक र ३२ हजारले शेयर गरेका छन् । फोटोमा म्याक्स जेडी…विस्तृत समाचार »
सेक्सको भोक मेटाउन इन्टरनेटको प्रयोग, यस्तो छ नेपालीहरुको पोर्न साइटप्रतिको मोह
४, पुस काठमाडौँ । नेपाली समाज सेक्सका विषयमा खुलेर कुराकानी हुँदैन । सेक्सका बारेमा कसैले कुरा गरिहाले पनि कुरा गर्ने व्यक्तिहरू आलोचनाको पात्र बन्ने निश्चित छ। तर हाम्रो समाज सेक्स वा यससँग सम्बन्धित विषयमा चाख नै नराख्ने भने होइन । साइट सम्बन्धी अध्ययन गर्ने एलेक्सा डट कमका अनुसार नेपालमा पोर्न साइटहरु राम्रै खुल्छन् । एलेक्सामा देखाइएको तथ्याङ्क अनुसार एउटा पोर्न साइट ४३ नम्बरमा छ ।…विस्तृत समाचार »